राजा र बादीको दर्जा एउटै हो : अगुवा हिक्मत बादी – Dullu Khabar
राजा र बादीको दर्जा एउटै हो : अगुवा हिक्मत बादी
१७ फाल्गुन २०७७, सोमबार १३:१०
कृषियोग्य जमीनको माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअगाडि धर्नामा बसेका बादी समुदायका सोमबार आठौ दिन पुग्यो । बादी समुदायका २ सय ४० जनाभन्दा बढी बालबालिका, सुत्केरी महिला, वृद्धवृद्धा र युवा खुला चौरमा बसिरहेका छन् । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि आठौं दिनदेखि धर्नामा उनीहरुका बिषयमा कसैपनि चासो दिएका छैनन् । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग भएको बार्ता पनि असफल भएको छ ।
मुख्यमन्त्रीसँगको वार्ता असफल भएपछि थप आन्दोलित बनेका उनीहरुका मागका बिषय बादी अगुवा तथा सघर्ष समितिका अध्यक्ष हिक्मत बादीसँग रमेश रावलले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
१. तपाईहरु अहिले आन्दोलनमा हुनुहुन्छ यसको कारणले केहो ? तपाईहरुको समुदायको इतिहास कस्तो हो ?
ऐतिहासका कुरा गरौ भने राजाहरुको पछि लागेको जाती चाहि हो । जुन शाहवंश राणाहरुसँग लागेको हो । उनीहरुको परिवारसँग नाच्दै रमाउँदै मनोरञ्जन दिने समुदाय हो । राजा त्यहाँ पुगेँ, हामी वादी यहाँ । राजा र बादीको दर्जा एउटै हो । उनीहरुलाई मनोरञ्जन दिने, उनीहरुको वरिपरि रेखदेखमा बस्ने समुदाय हो । तर, राजाहरुले राजाका नातागोताहरुले उनीहरुको सन्तानहरुले भरौटेहरुले बादी महिलाहरुलाई यौन शोषण गरेकै हुन् । किनकि त्यो बेला बादीहरुलाई खानपिन चाहिने आफ्नो सीप प्रयोग गरेर नाचगान गर्ने कला बेच्ने काम थियो । पछिपछि बादीहरुले शरिर बेच्न थाले । आवश्यकता केही पुर्ति नभएका कारणलले बादी महिलाहरुले शरिर बेच्न थालेका हुन् । खानाका लागि परिवार पाल्नका शरिर बेच्ने काम गरे ।
बादी समुदाय देशका बिभिन्न भागमा छरिएर बसेको छ । देशको जनसंख्या हेर्ने हो भने ३८ हजार जनसंख्या छ । लोपोन्मुख समुदाय हो । हामीलाई सिमान्तकृत समुदायका राख्यो । हामी कुनै त्यस्ता किसिमका जिविकोपार्जनका लागि भत्ता पनि पाउन सकेका छैनौं । त्यस कारणले बादी समुदायका इतिहास केलाउँदा धेरै समय लाग्छ ।
२.पराम्परागत पेशाबाट जिविका चलाउन ग्राहो भएर तपाईहरु अहिले खोला किनारमा बस्न थाल्नुभएको हो ?
पहिला नाच्ने गाउने चलन थियो । त्यहीबाट परिवार पालिएको थियो । पछि यौन व्यवसायमा लागेर परिवार धानिएको थियो । अहिले पहिलाका दयालु मानिस छैनन् । गाउँ गाउँमा गएर सारङ्गी र मादल बजाएर मनोरञ्जन दिएर कसैले माना दिदैन् । हातखुट्टा छन काम गरेर खाउँ भन्छन् । काम गरेर खाने जग्गा छैन् । खोलामा माछा मर्दैन, बजार क्षेत्रमा गाडीमा मालसमान ओसार पोसार लोडअनलोड हुदैँन् । खोला किनारमा बालुवा गिट्टी कुट्न पाइदैन् स्थानीय सरकारले कर लगाउँछ । बालुवा गिट्टी क्रसर मेसिनलाई स्थानीय सरकारले ठेक्का दिन थाल्यो । जोसँग सम्पती छ उनीहरुलाई रोजगारी भयो हरेक क्षेत्रमा हामी पछाडी पर्यो । अन्तिम शरिर बेचेर हुन्छ कि भन्यो त्यो पनि बेच्यो । तर, सरकारले बन्द गरिदियौं । त्यसकारण खानका समस्या भयो । त्यही भएर हामीले काम गरेर खान सक्ने जमिन चाहियो भनेर आन्दोलन गरेका हौं ।
३. अहिले तपाईहरुले आन्दोलन गरिरहनु भएको यसको मुलमुद्धा के हो ?
यो मुल मुद्दा उठ्नु बिषेश कारण छ । कोरोना कहरका बीच म गाउँमा गए । गाउँमा गएपछि सबै जना मान्छेहरु देश विदेशबाट आ–आफ्नो घरमा आए । बादी समुदायको आयस्रोत बन्द भयो । जुन दैलेखका बिभिन्न ठाउँमा खोलानालामा मजदुरी गर्थे । भारतमा मजदुरी गर्थे ती बादी समुदायमा गाउँमा फर्के । बैंक ब्यासेन्स हुने खेती हुनेले खेती गर्न थाले । तर, हामी बादीको केही थिएन् । केवल यो देशको नागरिकता बाहेक । उनीहरुले खेती किसान परिवार पालेँ । मैले मेरै आँखा अगाडी भोकले तिन जना मान्छे मरेको देखेँ । त्यो पीडादायी अवस्था देखिसकेपछि हैन ? यो देशको नागरिक हामी पनि हौं । यो देशको प्रगती हेर्ने हाम्रो इच्छा छ । धनी राष्ट्र भएको हेर्ने इच्छा छ । ‘खुसी नेपाली समृद्ध नेपाल’ सरकारको नारा छ । यसमा हामी पनि के गर्ने त भनेर सोच्यौ र मैले यसरी बसेर हुदैँन् अहिले सरकार हाम्रो छ । यही वर्गका लागि लडेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हो । यही वर्गका लागि लडेको छ । हाम्रै वर्गको सरकारले हाम्रा माग सुनोस भनेर आन्दोलन गरेका हौं ।
४. तपाईहरु र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीबीच बार्ता भयो के प्रगति भयो ?
बार्ता त भयो । बार्ता मौखिक रुपमा भयो । लेखित हुनुपर्छ । उहाँले सबै कुरा ठिक छ भन्नुभयो । तर, हामीले मागेको मुल माग उहाँले सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्नुभयो । सात वटा मागमध्ये छ वटा माग चाँही पुरा गर्न सक्छौं । एउटा माग भूमीको माग सम्बोधन गर्न सक्दैनौ भन्नुभयो । यही प्रदेश सरकारले राउटेलाई खोजी खोजी तिमीहरु एक ठाउँमा बस प्रदेश सरकारले जग्गा किनिदिन्छ भन्नुहुन्छ । राउटे, बादी र राजी हामी एउटा ‘क्याटाक्वारी’मा पर्छौ । म जंगलमा नै बस्छु खेती किसान गर्दैन भन्ने राउटेलाई जग्गा दिने ? हामी हजुर गर्छौ भन्नेलाई जग्गा उपलब्ध गर्न सक्दैन त भन्न मिल्दैन् । कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लामा कति बादी छन् । १० वटै जिल्लाका भूमी आयोगका अध्यक्षलाई बोलाएर र संघबाट बोलाएर बादी समुदायको बिषयमा एउटा प्याकेज बनाई दिनु पर्यो भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अरु समुदायसँग हामीलाई दाज्नु भएन । दलित समुदाय भित्र पनि बादी समुदायलाई छुट्टै प्याकेज र एकिकृत बस्ती विकास गरियोस भन्ने हाम्रो माग हो । हामीलाई जमिन दिनुहोस खेती गर्छौ सरकारलाई कर तिर्छौं हाम्रो माग यही हो ।
५. आन्दोलन गरिरहनु भएको छ । तपाईहरुका माग पुरा भएनन् भने के गर्नुहुन्छ ?
आशा छ हाम्रो माग पुरा हुन्छ । यदि त्यसो भएन भने आन्दोलन निरन्तर जारी रहन्छ । हिजोको आन्दोलनमा हाम्रा दिदिबहिनीका लुगा च्यातिए । लठ्ठी चार्ज गरियो हाम्रा दिदिबहिनीहरु घाइते भए । जसरी हामी हिजोका दिनमा शरिर बेच्नका लागि नाङ्गियो । त्यो नाङ्गोपना सरकारलाई हामी देखाउँछौं । नाङ्गिएर नागरिक सडक आउनु योभन्दा सरकारका लागि लाजमर्दो बिषय अरु के हुन सक्छ ।
६. कदामकदाचित तपाईहरुको माग पुरा भएनन भने ?
निरन्तर हामी आन्दोलन गर्छौ । आन्दोलनबाट यदि हामी थाक्यौ भने सधै काम गरेर खाने मान्छे त्यहाँ चौरीमा बसेर सधै त खान सक्दैनौं । काम गरेर खाने मान्छे । फेरी शरिर बेच्नतिर लाग्ने अवस्था आउँछ । त्यो अवस्था आउन नदिनका लागि जंगल फडानी गरेर पनि बस्छौं । त्यही खेती किसानी गरेर खान्छौं ।
Tags: अन्तरवार्ताकर्णाली प्रदेशवादी समुदाय